သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ၂၀၁၂ အိပ်မက် ဂယောက်ဂယက်
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:23
သူကြီးကတော့ လုပ်တော့မယ်..... ဒီမှာက www.big-niece.blogspot.com ကိုသွားပြီး မန့်တော့မလို့ လုပ်နေတဲ့ဟာကို....... ခဏ ခဏ အိပ်မက်မက်နိုင်တဲ့ သူကြီး
Friday, 28 December 2012 at 00:41:00 GMT
You are so funny. LOL!
Friday, 28 December 2012 at 00:59:00 GMT
မိုက်တယ်... မိုက်တယ်.... ကဗျာတွေရော အားလုံးကြိုက်....
သဂျီးပြောမှ.... သူများတို့ ဘလော့ဆို ဖတ်မယ့်သူ မချိပေါင် ဂျာ...
တခြား ဘလော့တွေ သွားမဖတ်တာ မလည်တာလည်း မဟုတ်ရပါဘူး... ဘလော့တော်တော်များများ ဖတ်ပါတယ်... ကော်မန့် ရေးရမှာသာ ပျင်းလို့ မရေးမိတာရယ်ပါ.... ဘလော့ဂါထဲမှာတော့ ညက်နှာ အငယ်ဆုံးပါဂျာ....း)
Anyway... V Happy New Year 2013 to you....!!!
Friday, 28 December 2012 at 02:05:00 GMT
ဟွင်း ဒီက ဖတ်ရင်းတန်းလန်း ဟိုဘလော့လိပ်စာအတိုင်းသွားနေပြီ။ Blog not found တွေ ဖြစ်နေပြီ နောက်မှ ဒင်းက အိမ်မက်မက်နေတာကိုး ဟွင်းးးးးးးးးးးးးးးးး လုပ်လိုက်ရင် ဒီလိုချည်းပဲ။ လိုက်စနေတယ် ဗြဲ... ဒီပိုစ့်လေးက အိမ်မက်ဆိုပေမယ့် ဗဟုသုတရတယ်နော် တဂျင်းမီး ဘလော့စရေးတဲ့သူတွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ကြာလာတဲ့အခါ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ မာနလေးတွေကို ချိုးနှိမ်သင့်တာတွေ စုံလို့ပါပဲ :D
Friday, 28 December 2012 at 04:22:00 GMT
စာလေးဖတ်ရတာ ပျော်လိုက်တာ .. ရွှေစင်ဦး ကတော့ သကြီး လာလာ မလာလာ သကြီး ရေးတဲ့ စာတွေ ကို အမြဲလာဖတ်မှာပါ... သကြီးမင်း နှစ်သစ် မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းလျှက်
Friday, 28 December 2012 at 04:47:00 GMT
Friday, 28 December 2012 at 05:26:00 GMT
တော်တော်များများကိုယ့်လိုပါပဲလား အဲဒီဘလော့တကယ်ရှိတယ်မှတ်လို့ သွားဖွင့်လိုက်သေးတယ်..း)))
Friday, 28 December 2012 at 07:43:00 GMT
Friday, 28 December 2012 at 10:22:00 GMT
နောက်လဲ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို အိပ်မက်တွေ ဆက်မက်ဦးမယ်။ အိပ်မက်တွေ စုထားတာ အများကြီး ရှိသေးတယ်။း)
ကျေးဇူးနော်။ အားပေးသွားလို့။ နောက်လဲ ပေါခွင့်ရရင် ပေါပါဦးမယ်။
စုချစ်ဘလော့က ညှက်နာ ငယ်ပါဝူးဂျာ။ တဂျီး လာဖတ်နေကျပါ။
ပိစိလေးက လူလေး သေးသလောက် သဘောပေါက်မြန်တယ်။ မုန့်ဝယ်ကျွေး။ အဲလေ.. မုန့်ဝယ်ကျွေးရဦးမယ်။း)
သူကြီးလဲ အမရွှေစင်ဆီ လာလာချောင်းပါတယ်။ အမရွှေစင်လက်ဖြစ်ကလေးတွေဆို မလွတ်တမ်း ဖတ်နေကျပါ။ လာအားပေးတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးနော်။
လူပျိုကြီးတွေ ခက်တာဘဲ သိနေတယ်ဟုတ်။ အပျိုကြီးတွေ ခက်တာကိုဖြင့် မပြောဘဲနဲ့။ ခက်လွန်းလို့ အခု လုံးပါး ပါးနေပြီ မဟုတ်လား။ (ပိန်တာကို ဆိုလိုသည်)။း)
လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးနော်။ ဘလော့ မရေးဘူးလား မသိဘူး။ လိုက်ရှာတာ မတွေ့လို့။
ဒီတစ်ခါ အရမ်းကျေနပ်မိတယ်ဆိုတော့ ဟိုတုန်းက မကျေနပ်ခဲ့ဘူးပေါ့။ ဟုတ်လား။း))
သူကြီးကွန်မင့်လေးကို ပို့စ်အဖြစ်တင်မယ်ဆိုတော့.. အလဲ့.. တယ်ဟုတ်တဲ့ သူကြီးပါလား။း)
Friday, 28 December 2012 at 13:24:00 GMT
အော်... အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲက သူကြီးမင်းရေ. အဟုတ်ကြီးထင်ရပေါင်းလည်း အမှတ်မရှိများခဲ့ပါပေါ့။ မကြားဘူးပဲ အကြားထူးတဲ့ စကားလုံးလေးတွေတောင် လိုက်မှတ်နေမိပါရဲ့ 'ဘလော့ဂဒဏ် ဘလော့ ပရိုမိုရှင်း ဘလော့ မားကက်တင်း' ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ကွယ် :P
ကဗျာလေးတွေဖတ်ရတာ အမြတ်ပေါ့လေး)
Friday, 28 December 2012 at 14:31:00 GMT
အိပ်မက်က ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့တောင် ရတယ်. (ရှည်လို့..ပြီးတော့ ဒက်ထိမှန်လို့..)
၂၀၁၃ မှာတော့ ၂၀၁၂ နဲ့မတူ ထူးခြားမှုတွေနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ လို့ နှစ်သစ်အတွက် ဆုမွန်တောင်းပါတယ် သူကြီးမင်း..
Friday, 28 December 2012 at 18:05:00 GMT
ဟုတ်ပ ..အကိုကတော့ လုပ်ပြီ .ဒီမှာတစ်ကယ် နှိပ်မိတော့မလို့....:P အပျိုကြီး စာရင်း မဝင်ချင်သေးပါဘူး အကိုရယ် နည်းနည်းလောက် လျော့ပေးလို့ရမလားဟင်.... ဝှက်ဖဲလေးအကြောင်း ပြောပြမယ်လေ...:D
တဂျင်းမီးက အိမ်မက်မက်နေတာ ဒီက တကယ် သွားနှိပ်တော့မလို့ ဂျ..တဂျင်းမီး ပို့ စ်တွေ ဖတ်ရတိုင်း ပြုံးရတယ်..မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ...
Saturday, 29 December 2012 at 02:46:00 GMT
သူဂျီးပိုစ့်ဖတ်ပြီး ဘလော့ကို လည်ရတာ ဖတ်ရတာ ပျော်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို သတိတရ လွမ်းသွားတယ်
ခုတော့ ဘလော့ဖတ်ဖို့ရော ဘလော့အတွက်ရေးဖို့ပါ မနည်းအချိန်ပေးနေရတော့ အရင်တုန်းက ဘလော့အတွက် အချိန်တွေအများကြီးပေးနိုင်ခဲ့တာကို သတိတရ ရှိမိသွားတာပါ.
သူဂျီးပြောသလိုပါဘဲ.. အသွားရှိမှ အပြန်ရှိတာကလားနော်.း)
Saturday, 29 December 2012 at 05:48:00 GMT
Sunday, 30 December 2012 at 12:19:00 GMT
HAPPY NEW YEAR.. ပါ သူကြီးရေ...
Monday, 31 December 2012 at 08:39:00 GMT
ပို့စ် အစကနေအဆုံးထိ မနားတမ်းဖတ်ဖြစ်အောင်ကို စာဖတ်သူကို
တဂျီးချစ်တဲ့ ကောင်မလေးကိုရော အဲလို
တဂျီးနောက်ကို ပါလာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း
ရှော်နေတာလား? တဂျီးကပဲ ချော်နေတာလား
ဘလော့ကိုတော့ သွားကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးမိပေမဲ့
ဖွင့်တော့ဖွင့်မကြည့်မိသေးဘူး..တဂျီးရဲ့ အညာမိသွားမှာ စိုးလို့..ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ..
ကဲ တုံးဖလားရွာက တဂျီးမင်း...ရှင်
တော်တော်လဲ ရေးတတ်တဲ့ တဂျီး..)
Monday, 31 December 2012 at 15:53:00 GMT
အောက်ဆုံးရောက်မှ အိမ်မက်မှန်းသိတယ်ဗျာ တူမလေးရှိရင် အူးလေး ဖမ်းတော်လိုက်ပီေိေိ
Monday, 31 December 2012 at 18:34:00 GMT
သူကြီးမင်းက အိပ်မက်ခဏခဏမက်မှာပေါ့ ခမျာမှာ ခမည်းလိုနေရှာတာကိုး...သနားပါရဲ့ ကျွတ်စ်ကျွတ်စ် ( ဘိလပ်လေဖြင့် သနားလိုက်ခြင်း )
နှစ်ကူးမှာ အချစ်ထူးနဲ့ အသစ်မမြူးလိုက်ရရှာတဲ့ သူကြီးမင်း...နှစ်ဆန်းမှာ အချစ်တစ်သန်းနဲ့ ( မှတ်ပလားဟဲ့ ) စခစ်သန်းဖွင့်နိုင်ပါစေဗျား...
Monday, 31 December 2012 at 18:56:00 GMT
လူကြီးကို လှည့်စားသလို ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်နော်။ အဟုတ်ကြီး ထင်သွားတယ်ဆိုတော့။း)
တိတ်တိတ်နေနော်။ တော်ကြာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ လာကမ်းလှမ်းနေဦးမယ်။ သူကြီးမင်းက အားတာမဟုတ်ဘူး။း)
အပျိုကြီးစာရင်း ၀င်နေပြီးတဲ့ဥစ္စာ။ ၀င်ချင်ပါဘူးဆိုတော့ ခက်ပြီရော။း)
တကယ်နှိပ်ပစ်လိုက်ရမှာ။ ဒါဖြင့် ပြုံးပြုံးကြီး ဖတ်သွားတယ်ပေါ့။း)
အမချောက မအားတဲ့ကြားထဲက စာကောင်းပေကောင်းတွေ ရေးနိုင်သေးတယ်။ သူကြီးတို့ကတော့ ရေးလိုက်ရင် အရည်မရ အဖတ်မရရယ်။ လေးလေးနက်နက် မရှိတာ ပြောတာပါတယ်။
အိပ်မက်ကတော့ တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ အိပ်မက်တုပေါ့ ကငြိမ်းရယ်။း)
နှစ်ခါဘဲ ရီသွားတယ်။ ဟဟတဲ့။ ကပ်စေးနှဲလိုက်တာ။း)
တဂျီးက ပစ္စလက္ခစာတွေသာ ရေးတတ်တာ။ အချစ်ရေးက လုံးဝကံမကောင်းရှာပါဘူး ညီမရယ်။ အသက်က လူလတ်ပိုင်းရောက်လာပြီ။ တစ်နှစ်တစ်ယောက် တဂျီးကို စွန့်ပစ်ထားခဲ့ကြတာ အယောက်နှစ်ဆယ်မကတော့ဘူး။ အဲဒီလောက် တဂျီး
အချစ်ရေး ကံမကောင်းတာပါ။ ဟာဟ။ (ယုံလိုယုံညား)။း)
တူမအရင်းတော့ ရှိဘူးဗျ။ ဆယ်ဝမ်းကွဲလေးတွေဘဲ ရှိတယ်။ ဒါနဲ့.. အဒေါ်လေးတွေများ ကမောင်ဆီ ရှိလေသေးသလား မသိ။း)
ဘုရား ဘုရား..အချစ်တစ်သန်းနဲ့ ဆိုပါလား။ လူကို သေကြောင်းကြံတယ်။ သူ့ကျတော့ တစ်ယောက်ထဲကိုတောင် လက်မြှောက်နေရတာကိုများ။ ချစ်ကြောက်နေရတာကို ပြောပါတယ်။း)
Monday, 31 December 2012 at 20:40:00 GMT
အဲ့ဘလော့ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ကြံပီးကာမှ ရေးသူကိုသတိရပီး လက်ပြန်ရုတ်လိုက်ပါကြောင်းး :P
Tuesday, 1 January 2013 at 08:20:00 GMT
Tuesday, 1 January 2013 at 09:58:00 GMT
မှားဘီ မှားဘီ အိပ်မလို့ပါဆို သွားဖတ်မိတာ သည်ညတော့ သွားဘီလား မသိဘူးဆိုပီး သူ စိုးရိမ်နေမိသည်။ (မအိပ်ခင် အရမ်းရယ်ထားရင် တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်တတ်လို့)။
မကျေနပ်သေးဘူး။ မနက်ဖန် ထပ်လာဖတ်ဦးမှ။
အိပ်မက်လုပ်မယ်လို့တော့ မထင်ထားမိဘူး။ ဒါပေမယ့် ပိတ်သတ်တွေ စွဲမက်သွားလောက်အောင် ဖတ်ရင်းနဲ့ရယ်ရပြီး ဖတ်ပြီးလည်း တစ်ခုမက အများကြီး ကျန်အောင် ထွင်ရေးတယ်ဆိုတာတော့ ရိတ်မိတယ်။ ဟဟ။
Saturday,5January 2013 at 17:56:00 GMT
လူဇိုး။ နှိပ်မယ်ကြံပြီးကာမှ ရှောင်ထွက်သွားတယ်တဲ့။ သူကြီးမင်းကို အဲဒီလောက်ထိ ယုံကြည်ရှာတာကလား။း)
အိပ်မက်ရှည်ကြီးက တကယ်ပြုံးရလား မသိဘူး။ ဒါဖြင့် နောက်ကို ဒီထက်ရှည်တဲ့ အိပ်မက်ကြီး ထပ်မက်ဦးမယ်။ ဒါမှ တီလေးမေခင် ပိုပြုံးရမှာ။း)
ဘုန်းနှစ်တောက်က သောမနဿနဲ့ ပဋိသန္ဓေနေခဲ့ပုံရတယ်။ အမြဲတမ်း တက်ကြွနေတာဘဲ။
ဒါ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာဘဲပေါ့။
ရယ်ရတယ်ပြောလိုက် ရယ်စရာတွေ လုပ်ရေးလိုက်နဲ့ သူကြီးမင်းလဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် ပိုပေါလာသလားအောက်မေ့ရတယ်။ မဖြစ်ချေဖူး။ ပေါတာတွေ လျော့ဦးမှ။း)
Saturday,5January 2013 at 21:48:00 GMT
ဒါက နှစ်ထောင့်ဆယ့်နှစ်ရဲ့ အိပ်မက်ရှည်ကြီးပေါ့။
ဆယ်ဝမ်းကွဲ တူမနဲ့ ပေါင်းပြီး ထောင်းသွားလိုက်တာတွေ မနည်းဘူး အခုတော့လည်း နှစ်ထောင့်ဆယ့်နှစ်ဆိုတာကြီးက အတိတ်ဖြစ်သွားရပြန်ပြီ
ဗျာ နှစ်ထောင့်ဆယ့်သုံးမှာ ပြုံးလိုက်ကြသေးတာပေါ့။
Wednesday, 16 January 2013 at 15:04:00 GMT
အသူတို့လုိ ခုမှဘလော့ဂ်လေးလုပ်၊စာလေးမတောက်တခေါက်ရေးချင်ရာရေးနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ထားသင့်တဲ့စိတ်ဓါတ်လေးပါသိသွားရပါတယ်။ဗဟုသုတလဲရတယ်။ရီလဲရီရတယ်။ ဘလော့ဂ်ပရိုမိုရှင်းဆင်းသွားတာမဟုတ်ရပါနော်။အမြဲလာဖတ်တယ်။ဒီတခေါက်တော့ မ မန့်ပဲမနေနိုင်တော့လို့ :)
Tuesday,5February 2013 at 07:27:00 GMT
သူကြီးရေ (သူများတွေခေါ်တာတွေ့လို့ လိုက်ခေါ်တာ)... မဗေဒါလေ ကိုယ့်ဘလော့လာလည်အောင် marketing ဆင်းပြီး ကွန်မန့်ပေးလေ့ရှိပါဘူး... ဘာလို့လဲဆိုတော့ Marketing ဆင်းပြီးကိုယ့်ဆီပြန်လာလို့ ပေးတဲ့ Comment တွေကလဲ အနှစ်သာရ ရှိချင်မှရှိတာလေ... သူများဘလော့တွေ မလည်ဖြစ်၊ ကွန်မန့်တွေ မပေးဖြစ်တဲ့ အပြင် ကိုယ့်ဘလော့က ပုံမှန် update သိပ်မရှိတော့ ခုဆို ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ကို ကွန်မန့်ရဖို့ သိပ်မလွယ်ဖြစ်နေတာပေါ့.. ဒါပေမဲ့ အားမလျော့ပါဘူး... အားရင်တော့ ကိုယ်ရေးချင်တာလေးတွေ ရေးဖြစ်နေပါသေးတယ်...
ခု ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တဆင့်ချင်း ဟာသနှောရေးထားလို့ သဘောကျလို့ အားပေးတဲ့အနေနဲ့ ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ... ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပိုစ့်မို့ အဆုံးထိ ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်...
Monday, 18 February 2013 at 07:31:00 GMT
ဘကြီးဦးကိုကိုမောင်ရေ၊ ကျန်းခန့်သာလို့မာပါစ။ မတွေ့တာကြာပေမယ့် လို့ မမေ့တာတော့ အမှန်အကန်ပါ။ စာရေးသားတာအင်မတန် ကောင်းပါ၏။ ထိုကဲ့သို့ ဘလော့ဂါမျိုးဖြစ်ချင် ပါသည်။
Tuesday,5March 2013 at 12:18:00 GMT